အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပုံပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ် – WunYan
ဒီပုံက ညနေက ရှယ်လုပ်ထားတဲ့ news ထဲကပုံပါ။ သူ့နာမည်က Abdul လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသက်က ၃၅ နှစ်ပါ။ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့် လက်ဘနွန် နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တစ်ဦးပါ။ သူ့မှ ၉ နှစ်အရွယ်သား ရယ်၊ ၄ နှစ်အရွယ် သမီးတစ်ယောက် ရယ်ရှိပါတယ်။
မိန်းမကတော့ စစ်အတွင်းမှာ ဆုံးသွားပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘေရွတ်မြို့ ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် ရဲ့ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ လှေခါးပဲ ရှိတဲ့ တိုက်တစ်ခုရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အခန်းကျဉ်း ကျဉ်းလေး မှာ သူတို့ သားအဖ သုံးယောက်နေပါတယ်။ သူဟာ သူတောင်းစား တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ Abdul ဟာ ဘေရွတ် မြို့ လည်က ကားလမ်းမ ပေါ်မှာ သူ့ သမီးငယ်လေး ကိုချီပြီးတော့ နေဝင် မိုးချုပ် ဘောပန် လေးတွေ ရောင်းပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော် နေတဲ့ သမီးငယ်ကို ချီပြီး ကားကြို ကားကြားမှာ ဘောပန် လေးတွေ လိုက်ရောင်း နေတဲ့ သူ့ကို နော်ဝေက ပရဟိတ သမား တစ်ယောက်က အမှတ်မထင်ပဲ ဓာတ်ပုံ ရိုက်မိသွားတယ်။
ပြီးတော့ Twitter ပေါ်မှာ တင်လိုက်တော့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အနိုင်မခံ အရှုံး မပေး သားသမီးပေါ် ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြထားတဲ့ အဲဒီပုံဟာ viral ဖြစ်ပြီး အရမ်း နာမည်ကြီးသွားပါတယ်။ buypens ဆိုတဲ့ hashtag လေးသုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေ့တဲ့ လူတိုင်းက ဂရုဏာသက် သွားကြပါတယ်။
Social networks တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သူကို ဘယ်သူမှန်း မသိပေမယ့် လူတွေက ဝိုင်းပြီး ရှာပေးတဲ့ အတွက် ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ သူဘယ်သူဆိုတာ သိသွားကျပါတယ်။
Abdul က အရမ်းအံ့သြနေတယ်။ သာမန် နေ့တစ်နေ့လို သူဘောပန်ရောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ သူကိုလူတွေက လာနှုတ်ဆက် စကားတွေပြော ဆိုတော့ သူပထမ ကြောက်ပြီး ပြေးဖို့တောင် စဉ်းစားမိသေးတယ်။
သူထင်တာ ကလေးတွေနဲ့ သူ့ကိုယ် အတူမနေရ အောင်ခွဲလိုက်ကျ မယ်ထင်လို့တဲ့။ သူအကြောင်း သတင်းဌာန အတော်များများက ကြေငြာပေးပြီး ပရဟိတ သမားတွေ crowdfunding page လေးလုပ်ပေး လိုက်တာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူအတော်များများက ဂရုဏာသက်ပြီး ဝိုင်းဝန်းလှု ကြတာ ခုဆိုရင် $17K ရသွားပါတယ်။
သူဟာ တစ်ကယ်ကို ကလေးတွေ အပေါ်တာဝန်ကျေတဲ့ ဖခင်ကောင်းပီသ တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ မိဘမေတ္တာမှာ အသားအရောင် ခွဲခြားတာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့ ဘာသာခြား ဖြစ်တာတွေ မရှိပါဘူး။ ငါသာ ထမင်းမစားရ နေမယ် ငါသားသမီး ဘယ်တော့ မှ ထမင်းမငတ် စေရဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ပဲရှိတယ်။
Credit : Ko Pho June
သားသမီးတွေကို ၀မ်းနှင့်လွယ်မမွေးခဲ့ပေမယ့်သားသမီးဘ၀ လှပဖို့ကို ပခုံးနဲ့ သယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေ……….
သားသမီးတွေအပေါ် အသက်နဲ့ရင်း ချစ်ခြင်းတွေရှိခဲ့သော်လဲသူ့ရဲ့ အချစ် ဖွင့်လှစ်ကာမပြ ဆုံးမ တတ်တဲ့ အဖေ…………
သားသမီးတွေနဲ့ တူကာယှဉ်ပြုံး ပျော်ကာမဆုံးနေချင်သော်လဲနံနက်မိုးသောက်အာရုဏ်ရောက်ချိန်မှစနေ၀င်မိုးချုပ်ထိ တကုပ်ကုပ် အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အဖေ…………..
သားသမီးများဆိုးသွမ်းသောခါ စိတ်စေတနာအရင်းခံနှင့်မုန်းလိုကမုန်း ရိုက်နှက်ကာသာ ဆုံးမ ခဲ့တဲ့ အဖေ……………
အဖေ့ စေတနာ ……….
အှနျလိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ပုံပါ။ ဖတျကွညျ့ပါ။ အရမျးကောငျးပါတယျ
ဒီပုံက ညနကေ ရှယျလုပျထားတဲ့ news ထဲကပုံပါ။ သူ့နာမညျက Abdul လို့ချေါပါတယျ။ အသကျက ၃၅ နှဈပါ။ ဆီးရီးယား ပွညျတှငျးစဈ ကွောငျ့ လကျဘနှနျ နိုငျငံကို ထှကျပွေးလာတဲ့ စဈပွေးဒုက်ခသညျ တဈဦးပါ။ သူ့မှ ၉ နှဈအရှယျသား ရယျ၊ ၄ နှဈအရှယျ သမီးတဈယောကျ ရယျရှိပါတယျ။
မိနျးမကတော့ စဈအတှငျးမှာ ဆုံးသှားပွီလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဘရှေတျမွို့ ဆငျးရဲသား ရပျကှကျ ရဲ့ ကြိုးပဲ့နတေဲ့ လှခေါးပဲ ရှိတဲ့ တိုကျတဈခုရဲ့ ခေါငျမိုးပျေါမှာ ရှိတဲ့ အခနျးကဉျြး ကဉျြးလေး မှာ သူတို့ သားအဖ သုံးယောကျနပေါတယျ။ သူဟာ သူတောငျးစား တဈယောကျ မဟုတျပါဘူး။ Abdul ဟာ ဘရှေတျ မွို့ လညျက ကားလမျးမ ပျေါမှာ သူ့ သမီးငယျလေး ကိုခြီပွီးတော့ နဝေငျ မိုးခြုပျ ဘောပနျ လေးတှေ ရောငျးပွီး အလုပျလုပျပါတယျ။
တဈရကျမှာ ပငျပနျးပွီး အိပျပြျော နတေဲ့ သမီးငယျကို ခြီပွီး ကားကွို ကားကွားမှာ ဘောပနျ လေးတှေ လိုကျရောငျး နတေဲ့ သူ့ကို နျောဝကေ ပရဟိတ သမား တဈယောကျက အမှတျမထငျပဲ ဓာတျပုံ ရိုကျမိသှားတယျ။
ပွီးတော့ Twitter ပျေါမှာ တငျလိုကျတော့ ဖခငျတဈယောကျရဲ့ အနိုငျမခံ အရှုံး မပေး သားသမီးပျေါ ဘယျလောကျခဈြကွောငျး ပွထားတဲ့ အဲဒီပုံဟာ viral ဖွဈပွီး အရမျး နာမညျကွီးသှားပါတယျ။ buypens ဆိုတဲ့ hashtag လေးသုံးပွီး ဓာတျပုံတှတေဲ့ လူတိုငျးက ဂရုဏာသကျ သှားကွပါတယျ။
Social networks တှရေဲ့ ကြေးဇူးကွောငျ့ သူကို ဘယျသူမှနျး မသိပမေယျ့ လူတှကေ ဝိုငျးပွီး ရှာပေးတဲ့ အတှကျ ရကျပိုငျး အတှငျးမှာ သူဘယျသူဆိုတာ သိသှားကပြါတယျ။
Abdul က အရမျးအံ့သွနတေယျ။ သာမနျ နတေ့ဈနလေို့ သူဘောပနျရောငျးနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူကိုလူတှကေ လာနှုတျဆကျ စကားတှပွေော ဆိုတော့ သူပထမ ကွောကျပွီး ပွေးဖို့တောငျ စဉျးစားမိသေးတယျ။
သူထငျတာ ကလေးတှနေဲ့ သူ့ကိုယျ အတူမနရေ အောငျခှဲလိုကျကြ မယျထငျလို့တဲ့။ သူအကွောငျး သတငျးဌာန အတျောမြားမြားက ကွငွောပေးပွီး ပရဟိတ သမားတှေ crowdfunding page လေးလုပျပေး လိုကျတာ။ တဈကမ်ဘာလုံးက လူအတျောမြားမြားက ဂရုဏာသကျပွီး ဝိုငျးဝနျးလှု ကွတာ ခုဆိုရငျ $17K ရသှားပါတယျ။
Adbul ကတော့ သူ့ကလေး တှကေိုကြောငျးထားနိုငျ တော့မှာဖွဈလို့ အရမျးဝမျးသာနေ ရှာပါတယျ။ ရတဲ့ပိုကျဆံတှထေဲက တဈခြို့ ကိုသူလို ဆငျးရဲ ဒုက်ခရောကျ နတေဲ့ စဈပွေးတှကေို တတျနိုငျသလောကျ ကူညီမယျလို့လဲ ပွောပါတယျ။
သူဟာ တဈကယျကို ကလေးတှေ အပျေါတာဝနျကတြေဲ့ ဖခငျကောငျးပီသ တဲ့လူတဈယောကျပါ။ မိဘမတ်ေတာမှာ အသားအရောငျ ခှဲခွားတာ ကိုးကှယျယုံကွညျမှု့ ဘာသာခွား ဖွဈတာတှေ မရှိပါဘူး။ ငါသာ ထမငျးမစားရ နမေယျ ငါသားသမီး ဘယျတော့ မှ ထမငျးမငတျ စရေဘူးဆိုတဲ့ စိတျပဲရှိတယျ။
သားသမီးတှကေို ၀မျးနှငျ့လှယျမမှေးခဲ့ပမေယျ့သားသမီးဘဝ လှပဖို့ကို ပခုံးနဲ့ သယျပေးခဲ့တဲ့ အဖေ……….
သားသမီးတှအေပျေါ အသကျနဲ့ရငျး ခဈြခွငျးတှရှေိခဲ့သျောလဲသူ့ရဲ့ အခဈြ ဖှငျ့လှဈကာမပွ ဆုံးမ တတျတဲ့ အဖေ…………
သားသမီးတှနေဲ့ တူကာယှဉျပွုံး ပြျောကာမဆုံးနခေငျြသျောလဲနံနကျမိုးသောကျအာရုဏျရောကျခြိနျမှစနဝေငျမိုးခြုပျထိ တကုပျကုပျ အလုပျတှလေုပျခဲ့ရတဲ့ အဖေ…………..
သားသမီးမြားဆိုးသှမျးသောခါ စိတျစတေနာအရငျးခံနှငျ့မုနျးလိုကမုနျး ရိုကျနှကျကာသာ ဆုံးမ ခဲ့တဲ့ အဖေ……………
အဖေ့ စတေနာ ……….